Otomatiki Vatengesi uye Fekitori - China otomatiki Vagadziri
Yakazara otomatiki Huru Fomati Kupisa Muchina
Iyo hydraulic yekupisa yekudhinda muchina ndiyo yakakwira giredhi kupisa kuchinjisa yekudhinda michina, iyo yekugadzira mashandiro 2-3 nguva yakakwira kupfuura yemanyorero muchina wekudhinda muchina. Iyo zvakare inochengetedza simba, uye inogona kudzvanya chigadzirwa chemasentimita akati wandei neyakaenzana kumanikidza uye nyore kushanda. Kufananidza nezvigadzirwa zvakafanana, inoratidzira gadziriro yemagetsi, kukanda muviri, dhizaini module, microcomputer control. Iyo yakakodzera kune ese kupisa kupisa kuchinjisa.
Yakakwira Pressure Hydraulic Kaviri Inoshandisika Heat Press Machine
Iyi ndeimwe yedu yakasimba kwazvo hydraulic kupisa muchina wekudhinda nemutengo unodhura uye makore enhamo isina kuita. Yakazara dijitari nguva uye tembiricha kutonga.
Midziyo yekuchinjisa kupisa ndiyo mhinduro kwayo yemabhizimusi madiki, inosanganisira mapepa ekuchinjisa kupisa. Muchina wakareruka uyu unogona kuendesa mifananidzo yako kuenda kuT-shirts, majini, piro makesi, jigsaw puzzles, mbeva mapads, maceramic matera nezvimwewo zvakatsetseka nzvimbo
Rotary 4 Chiteshi PLC Otomatiki Sublimation T Shirt Kupisa Press Muchina
Zviteshi zvina kupisa muchina wekudhinda unotora otomatiki mota kutenderera, kuchengetedza nguva uye basa; Uye muchina unoshanda.Muchina unogona kuendesa iwo anodhinda eakajeka mapatani uye mavara ari eiyo sublimation kana solvent ink kune zvigadzirwa zvakagadzirwa nehemp, fiber zvinhu. Iyo inokodzera kwazvo kudhinda yekudhinda pahembe, jira uye jira remamburara, ine hupfumi uye inoshanda, ichave yako yakanyanya kunaka sarudzo.